SANTOSH PAUDEL'S BLOG : 'नेट्लर'
जर्मनका प्रसिद्ध युद्ध नायक 'हिट्लर' संसार प्रख्यात छन् । 'साहसी' र 'क्रुरता'को ट्याग उनमा झुण्डिएको छ । उनी युद्धका नायक हुन् संगै संसार जित्ने सपना बोकेका 'आटिला' खलनायक पनि ! प्रसंग 'हिट्लर'बाट यस कथाका नायक 'नेट्लर' तिर जान्छ । 'नेट्लर' र 'हिट्लर' नाम उस्तै रहेता पनि 'काम' भने भिन्न छ । 'हिट्लर' युद्ध लड्थे संसार जित्ने सपना बोकेर । 'नेट्लर' लड्दैछन् देशका लागि लड्ने आफ्नै 'नायक' माथि हात बजारी गरिवी र अत्याचारको भोको पेट बोकेर । अचेल नेपालयमा 'नेट्लर' प्रख्यात छन् । 'हिट्लर' झैँ ।
समय अघि ऊँ साधारण 'नेपाली बर्फी' थियो । 'कसरी नेट्लर भएछ, मोरो लठेप्रो !' - साथिले जिब्रो नेपार्दै बोल्यो । उसो'भा नेपालयमा समयपछि धेरै 'नेट्लर' जन्मिने छाँट देखियो । खा'समा कुरो के रै'छ ! बुझाउँन कथाको बेलिविस्तार प्रारम्भ गर्नुपर्यो ।
को ? कहाँ? कस्ले? कस्लाइ? किन? के का लागि पिट्यो? म बुझ्दिन कारण म बोल्न र सुन्न नसक्ने 'बर्फि' झैँ छु तर देख्न सक्छु अनि 'नेट्लर'को कथा लेखिरहेको छु । आजका दिन सम्म 'म मात्र देख्न सक्छु' । र, त पछि पछि पानि झैँ अर्कैले बनाइएको बाटोमा कुदिरहेको छु । तर जुन दिन त्यो बाटो गन्तव्यहिन भएर हज्जारौँ 'नेपाली बर्फी'ले अर्कै बाटो बनाउँनु पर्ने हुन्छ, शायद त्यो दिन मेरो लागि पनि 'नेट्लर' बन्ने सुनौलो दिन हुनेछ र अरुका लागि पनि !
समय अघिदेखि नेपालयमा हज्जारौँलाइ सुन्न र बोल्न नपाइने बनाइएको थियो र अझै चलन चलायमान छ तर तीनका अंग बोल्न र सुन्न सक्ने थिए र छन् । र, पनि प्रताडित बनाइएको छ । शायद, त्यही समुह भित्रको प्रताडित सुन्न र बोल्न सक्ने तर बनाइएको एउटा 'नेपाली बर्फी' थियो । ऊँ मौनतामा आफैलाइ दशकौ देखि हुत्तिदै गएका प्रश्नको उत्तर खोजि गर्ने प्रयत्न गर्थ्यो ।
'देश हुत्तिदै छ,
'हुत्याउँनेलाइ थाहा होला नी'
'हुँदो हो थाहा'
'अस्ति बाटोबिराएर चिलसंग एक्कासि ठोक्किएर मनोहरामा झरेको जहाज झैँ कतै 'झर्ने र मर्ने' दिन पक्का छ'
'हो, र ! कहिले अनि को-को ?'
'बाटो बिराउँदै सहमति खोज्ने जहाज हाक्ने चालकहरु' तर त्यो दिन एकिन छैन् । र, त कुरो अलिक गम्भिर छ'
'तर चालक मात्रै हो कि 'हामी सब्बै नेपाली बर्फि' प्यासेन्जर पनि !'
'खै, कुन्नी ! थाहा भएन',
दशकौँ देखि अनगिन्ती यस्ता अनुत्तरीत प्रश्नहरुले 'चालक र जहाज' घेरिएको थियो, र आज पनि घेरिएका छन् । प्रश्न त्यता ठडिएको छ जहाँ जहाज चालक आफ्नै प्यासेन्जरबाट असुरक्षित बनेका छन् । लगभग सुरक्षाको घेरा तोडिइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ ।
'हो, र ! कस्ले तोड्यो?' जय ! जयकार ! त्यो 'धुन्दुकारीको'
'समयअघि जहाज चालककै त्यो धुन्दुकारी हुनसक्छ तर आज ऊँ महान 'नेट्लर' हो'
खतराको साइरनमा चलिरहेको जहाज हाक्ने कुनै एक पाइलटमाथि उस्ले 'खबरदारीको हात उठायो । त्यो कतै मज्जैले बजारियो । शायद, पाइलटमा एक किसिमको डरको तरंग फैलिएको हुनुपर्छ । त्यो तरंग पुन:उठ्न सक्ने डर पाइलटको मनमा उनिएको छ । अरु धेरै पाइलट संयमित र स्व:नियन्त्रित सान्त्वन्नाको लागि उन्मुक्तिको बाटो खोज्ने शुरमा छन् । यो चानचुने काम होइन । एक किसिमको 'संन्त्रास'को घण्टि बजाइदिएको 'महानता'को काम हो । र, ऊँ हेर्दा हेर्दै जहाज चालककै एक धुन्दुकारीबाट नेपालयमा 'नेट्लर' हुनपुगेको छ ।
लु, समयको अन्तरालमा सुन्न र बोल्न नसक्ने बनाइएको 'नेपाली बर्फी' धुन्दुकारी पनि 'नेट्लर' (नेपाली हिट्लर) बन्न चन्द्रमा दाहिने लागिरहनु पर्दो रहेनछ ।
सक्छौँ, बरु समय लगाएर एक छिन घोत्ल यस विषयमा, तिमीले पिट्ने, 'पिटिने' र '